48 Core ဂိတ် သတျတော ထုတ်လုပ်သူများ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - တရုတ် စက်ရုံ - MELONTEL
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖိုင်ဘာ အမြင် > ဖိုင်ဘာ အမြင် ဂိတ် သတျတော > 48 Core ဂိတ် သတျတော
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အမြန်အသေးစိတ် မူရင်းအရပ် - Zhejiang, China (Mainland)တံဆိပ်အမည်: Yuhuiမော်ဒယ်နံပါတ်: YH-1064ပစ္စည်းအမည်: မိုးလုံလေလုံဖိုင်ဘာ optic ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း: အအေး - rolledsteeladapter: SC / FC / LCစွမ်းဆောင်ရည်: 12/24/48/72 core ကိုအရွယ်အစား: 300x300x80mmအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်):5~ 20KGအပူချိ......
ပုံစံ:48 Core ဖိုင်ဘာ အမြင် ဂိတ် သတျတော
ပစ္စည်းအမည်: မိုးလုံလေလုံဖိုင်ဘာ optic ကက်ဘိနက်
ပစ္စည်း: အအေး - rolledsteel
စွမ်းဆောင်ရည်: 12/24/48/72 core ကို
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်):5~ 20KG
အပူချိန်: -40Â° C ~ + 60Â° C
ထုပ်ပိုး: 1pcs / box ကို
4/8/12/16/24/48/96 Core အပြင်ဘက် Fiber Optic Terminal သေတ္တာ IP65 ပလပ်စတစ် SMC FTTH Box PLC Splitter
1. အသုံးပြုသော ABS ပစ္စည်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အားသန်စွမ်းမှုနှင့်အလင်းကိုသေချာစေသည်။ ၈ ။ အနှစ် ၂၀ ကျော်ဘဝကိုအသုံးပြုပြီး၊ အမေရိကန်မှ SMC ပစ္စည်းကိုသုံးပါ
5. အရွယ်အစား: 383mm x ကို 285mm x ကို 170mm
၆။ FTTH ကျဆင်းမှု ၁၆ ခုအထိ၊ 2pieces 1x8 PLC splitter သို့မဟုတ် 1piece 1X16PLC splitters ထားရှိပါ။
hot Tags:: 48 Core ဂိတ် သတျတော, တရုတ် 48 Core ဂိတ် သတျတော, 48 Core ဂိတ် သတျတော စက်ရုံ, 48 Core ဂိတ် သတျတော ထုတ်လုပ်သူများ, 48 Core ဂိတ် သတျတော ပေးသွင်းသူများ, 48 Core ဂိတ် သတျတော စျေးနှုန်း, ဝယ်ပါ 48 Core ဂိတ် သတျတော, စိတ်ကြိုက် 48 Core ဂိတ် သတျတော